सुन बेच्ने बढे…. – Sourya Online
सुन बेच्ने बढे….
जमुना शर्मा, तारानाथ आचार्य २०७६ साउन २६ गते १७:१८ मा प्रकाशित
पोखराको रुपाकोट सुनचाँदी दोकानमा सुनको मुल्य ७० हजार पुगेपछि सुन बेच्न आएका ग्राहक ।
कास्की । नेपाली बजारमा सुनको भाउ बढे संगै सर्वसाधारणहरु सुन किन्नभन्दा बेच्न लागेका छन् । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा सुनको भाउ बढेपछि नेपाली बजारमा सुन किन्ने भन्दा बेच्नेको भिड बढ्न थालेको हो । चाडपर्वको मौसममा ग्राहक कुरिरहेका सुन व्यापारी यतिबेला सुन किन्न भन्दा बेच्न आएका ग्राहकहरुबाट हैरान छन् ।
मूल्य बढेको मौकालाई अवसरका रुपमा लिनेले आफू संग भएको सुन बेच्ने गरेका छन् । अहिले सुनका गहना किन्ने भन्दा पनि बेच्न खोज्नेको संख्या बढी रहेको सगरमाथा सुनचाँदी पसल महेन्द्रपुल पोखराका सुरेन्द्र विश्वकर्माले बताए । सुनको मूल्य बढेपछि बिक्रीमा भने कमी आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेका कारण नेपाली बजार पनि प्रभावित भएको हो ।
‘पसलभरी ग्राहक छन् तर सुन किन्न हैन, उनले भने, ‘आफ्नै पसलबाट प्रति तोला ५२ हजार रुपैयाँमा सुन खरिद गरेर लगेकाहरु अहिले त्यही बिल लिएर प्रति तोला ७० हजार रुपैयाँमा बेच्न आएका छन् ।’ आफ्नै ग्राहकको सुन खरीद नगर्ने पनि भएन, खरीद गर्न पैसा पुर्याउनै गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । तीज आयो भनेर सुनमा लगानी गरेका सुन व्यवसायीलाई निकै मर्का परेको दाबी विश्वकर्माको छ ।
सुनको शुक्रबार सम्मको मूल्य रु ७० हजार प्रतितोला रहेको छ । तेजाबी सुन रु ६९ हजार ७ सयमा कारोबार भएको विश्वकर्माले बताए । नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण व्यवसायी संघ कास्कीका प्रथम उपाध्यक्ष रामबहादुर विश्वकर्माले सुन व्यापार १० प्रतिशतमा झरेको बताए । ‘नेपाली महिलाको महानपर्व तीजलाई लक्षित गहना अहिले यत्तिकै थन्किएका छन् ।
‘ग्राहक पुराना गहना लिएर बेच्न आउनुभएको छ’, विश्वकर्माले भने, नयाँ सुन बैंकमा राखेर ग्राहकको पुरानो सुन खरीद गर्न बाध्य भएका छौँ ।’ झण्डै तीन–चार किलो सुन खपत हुने पोखराको बजारमा सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड राख्दै आकाशिएपछि यो व्यवसायबाट नै पलायन हुनुपर्ने स्थिति आएको उनको भनाइ छ । ‘यस्तै अवस्था हो भने व्यवसाय धरासायी बन्छ, कालीगढहरुले विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आउँछ’, उनले भने ।
उनका अनुसार अहिले कास्कीमा झण्डै ५०० बढी सुनचाँदी व्यवसाय दर्ता छन् भने र स्वर्णकार कल्याण संघमा दर्ता भएका ३०० कालीगढ प्रत्यक्ष रोगजारीमा संलग्न छन् । सुनको मूल्य बढ्नुमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अमेरिका र चीनबीचको पछिल्लो समय चलेको व्यापारिक द्वन्द्व नै प्रमुख कारण भएको व्यवसायीको भनाइ छ । डलरमा भन्दा सुनमा लगानी बढेकाले मूल्यवृद्धि भयो, माग बढेपछि मूल्य वृद्धि स्वभाविक हो । सुनको मूल्य देशको आन्तरिक अवस्थाले भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कारोवारले फरक सुन व्यवसायी भरत दियालीको भनाइ छ ।
रु ५८ हजारमा आठ तोला सुन खरीद गरेकी पोखरा चाउथेकी सानुमाया खड्का अहिले त्यही सुन बेचेर छोरालाई अष्ट्रेलिया पठाउने तरखरमा छन् । ‘पैसा पुगेको थिएन, सुनको मूल्य बढ्यो, यही बेला सबै सुन बेचेर छोरालाई अष्ट्रेलिया पठाउन लागेको छु , मूल्य घटेपछि पुनः किनौला । अहिलेको समस्या टर्ने भयो ।’ सुनको मूल्य बढेकोमा खड्काले खुशी व्यक्त गरे ।
दैनिक २५–३० तोला सुनका गहनाको व्यापार गर्दै आएका महेन्द्रपुल रुपाकोट सुनचाँदी पसलका सञ्चालक दशरत सुनारले अहिले सुन किन्ने मानसिकताले कोही ग्राहक नआउने गरेको बताए । ‘नेपालीको आयस्रोत भन्दा निकै उच्च रहेको सुन अब किन्न सहज छैन, तोलाको ७० हजार रुपैयाँ हालेर सुन किन्ने अवस्था छैन’, उनले भने, ‘चाडवाड नजिकिँदै गर्दा आकाशिएको सुनको मूल्यले सुनका गहना लगाउने इच्छा नेपाली महिलामा मरेको छ ।’
‘अहिले सबै ग्राहक सुन किन्ने होइन । बेच्न मानसिकतामा आउनुहुन्छ । दिनको तीन–चार तोला नयाँ सुन बेच्न पनि मुस्किल छ’, सुनारले भने । सुनमा लगानी खेर नजाने भएकाले पनि मानिस सस्तोमा किन्न र महङ्गोमा बेच्न खोज्ने उनको भनाइ छ । डलरको भाउ तलमाथि भइरहेपछि सुनको भाउमा पनि अस्थिरता आउने गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारकै असरले नेपाली बजारमा केही समयदेखि सुनको मूल्य बढिरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थिर भए पनि नेपालका ठूला व्यवसायीको कारण मूल्य बढ्ने गरेको साना व्यवसायीको आरोप छ । सुनको मूल्य बढेर ८० हजार रुपैयाँसम्म पुग्नसक्ने व्यवसायीले अनुमान गरेका छन् । सुनको मूल्य बढेकाले पसलमा किन्नेको भन्दा बेच्न आउनेको भीड लाग्न थालेको सुनचाँदी व्यवसायी संघ बागलुङका अध्यक्ष ओमबहादुर विश्वकर्माले बताए ।
‘सुनको भाउ बढेर माथि उक्लेपछि हामीले खरीद गर्न सकेका छैनौँ, उपभोक्ताले पनि किन्न सक्दैनन्,’ विश्वकर्माले भने, ‘पसलमा आएर किन्न भन्दा बेच्न खोज्ने धेरै छन् ।’ हरेक दिन दुई केजीसम्म सुन बागलुङका व्यवसायीले बैंकबाट खरीद गर्दै आएका थिए । तर दुई सातादेखि यो कारोवारसमेत ठप्प भएको छ ।
‘सानो पूँजीबाट दैनिक खरीद गर्दै काम गरिरहेका थियौँ, मूल्य बढेपछि खरीद र बिक्रीसमेत ठप्प भएको छ’ खातीले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्दा घटेकै र बढ्दा बढेकै मूल्य पाइने भएकाले स्टक राख्ने काम पनि जोखिमको हुन्छ ।’ स्टक राखेर मूल्य घट्यो भने व्यवसायीले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने उनले बताए ।
सुनको मूल्य नेपालको बजारले निर्धारण गर्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोल, सुन र डलरको भाउको सन्तुलनबाट नेपाली बजारमा पनि असर पर्ने गरेको हो । नेपालीको चाडपर्व सुरु हुनै लागे पनि बजारमा किनबेच नभएकोले सुनचाँदी व्यवसायी भने निराश भएका हुन् । उनीहरुले यो वर्षको चाडपर्वमा सोचेजस्तो व्यपार गर्न नसक्ने पक्का भइसकेको विश्वकर्माले बताए ।